1-Qaddar iyo doorasho.
Waxyaabaha qaar aad nolosha kala kulanto sida qaddarta waa in aad sidooda ku aqbashaa, maxaa yeelay wax awood ah kuma lihid, waxa aad awoodda ku leedahay wax ka qabashadooda waa waxa aad dooran kartid.
Waxaa loo baahanyahay in aad maskaxda ka shaqaysiiso oo kala ogaato waxa mudan u dhimashada iyo waxa aan mudnayn.
Wax walba is baddalkooda ayey wataan waa in aad uga tagtaa Dhaxal kuwa kugu issirka ah iyo kuwa adigaba jir ahaan kaaga soo go’ ay.
Dhaxalka aad ka tagayso wax walba ayuu noqon karaa xitaa geed aad talaasho oo kuwa bari dhalan doono ay harsadaan ba Allaha ka dhigo.
Mararka qaar dadku waxay moodaan in aad is baddashay, balse adiga ma ahan waxa is baddalay ee waa qalbigaada oo dadka saamaynta leh ay ku yaraadeen.
4-Qof iyo Nolol.
Haddiiba qof isku dayayo in uu baddalo qaab nololeedkaaga markaas uma qalantid in aad qaabishid qofkaas qaabka uu wax kuu tusayo.
5-Is baddal aan lagu farxin
Isbaddalada aan ku farax galin marka ay dhacaan waa markaas aad nolol run ah ku nooshahay waxayna ku xirantahay sida aad u qaabisho is baddalkaas.
Marka aad baddasho sida aad u fakarto ayaad baddali kartaa dunidaada.
7-Diin ka baxa
waxay wariyeen in Xajaaj bin Yuusuf (661-714) oo ahaa guddoomiyaha Ciraaq uu maalin maqlay wiil reer miyi ah oo akhrinaya suuradda quraanka ah ee ‘An-Nasr ama Idaa Jaa” oo u akhrinaya “Marka ay timaaddo guusha Alle iyo furashadu, oo aad aragto dadka oo diinta koox-koox uga baxaya/اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا”.
Naftu sida jirku u daalo oo kale bay u daashaa ee u raadiya xikmad ay ku nasato.”.
Cali Bin Abiidaalib
Abeeso dhul u ekaan bay kugu dishaa, wadaadna Dad u ekaan
10-Seddaxda qaab ee uu banii’aadamku u noolaado
Haddii la damco in aadamiga hal sifo oo qura lagu tilmaamo, sifada ugu habboon ee ay tahay in lagu sheegaa, waa in uu yahay “Noole Diin leh oo wax caabuda”. Aadamigu markii uu garaadsaday wuxuu dareemay in uu leeyahay cadow badan oo welwel iyo baqdin ku abuura, sida; Col, Cudur, Gaajo, Gabow, Geeri iyo qaar kale. Wuxuuna ku qancay in uusan lahayn awood uu isaga difaaco cadowgaas faraha badan ee gabowga iyo geeridu ugu culus yihiin.
Cabdisiciid cabdi Ismaaciil.
12-Nolosha waa balanqaad ee oofi balanta aad qaadday.
Waxaad haysatid ku raaxayso hadda waxna ka qabso, waa hubaal in ay noqon doonaan wax aad haysatay.
Mahdintaada yar waxaa laga yaabaa in ay sabab u noqoto in aad malaayin nimco siyaadsato.
Baryadaada Alle mar walba yeysan noqon in aad wax uga baahantahay oo kaliya,balse mararka qaar waa in ay noqotaa mid aad uga mahad celinayso nolosha iyo nimcada uu kugu mannaystay.
Qofka wax kuu diidaa u mahadceli sababta ma taqaanaa? wuxuu kugu dhiiri galiyay in aad naftaada baahideeda maareesato qofna aadan u baahan.
Ku faraxsanow in nolosha aadan wax walba ka haysan, waa laga yaabaa in aad igula yaabto balse waxaad ogaataa marka wax kaa maqan yihiin in jaanis uu kaa maqan yahay kaas oo kuu noqon kara qaraar aad wax ka barato iyo macaan aad ku faraxdo, marka haddii wax kaa maqan yihiin micnaheeda waa in wali wax kuu dhiman yihiin, balse haddii aysan waxba kaa maqnayn noloshaada waa macna beeshay.
Murugada yeysan mahanaqa kaa maahin, maalin walba waxay u dhaxaysaa murug iyo farxad.
Subax walba marka aad kacdo ka mahadnaq jaaniska laguu siiyay in aad maalin kale noolaato maxaa yeelay, dadka qaar jaaniskaas ma haystaan.
Uga faaiidayso maalintaada in aad saxato wixii kaa khaldamay shalay iyo darraad, barina wanaajiso si aadan u shallaayin.
Nolosha waqti walba ayey kaa dhamaan kartaa ee uga faaiidayso waqti walba sida uu kuu soo maro.